I-Arrows ivimbe iBucs ekuvaleni igebe kwiDowns - Impempe
I-Arrows ivimbe iBucs ekuvaleni igebe kwiDowns
February 16, 2022 February 16, 2022 Impempe.com
ILamontville Golden Arrows iphazamise i-Orlando Pirates ekuvaleni igebe phakathi kwayo neMamelodi Sundowns esicongweni selogi.
Emdlalweni weDStv Premiership ogcine uphele ngo 0-0 e-Orlando Stadium, ngoLwesithathu, bekungawina noma yiliphi iqembu kodwa langavuma nhlobo igoli.
Womabaili amaqembu abengaya ekhefini eselishayile igoli kodwa angawasebenzisa ngendlela amathuba awatholile. Nokho ithuba elihle kakhulu lehlele i-Arrows ngesikhathi uNduduzo Sibiya eshaya enhle ifree kick ngomzuzu ka-41, yafike yashaya ipali seyimdlile uSiyabonga Mpontshane.
Okuhlalukile ukuthi isicathulo esivela kuBafana Bes’thende besisha impela. Lokhu kucaciswe ukuthi uPule Mmodi nokaputeni uNKosinathi Sibisi bathole amakhadi aphuzi umdlalo usephansi.
Bobabili laba badlali ngeke babe khona emdlalweni olandelayo we-Arrows ngoba bese bethola amakhadi abo esine. Nomqeqeshi uLehlohonolo Seema ugcine ethole elakhe ikhadi eliphuzu ngokuphikisana nonompempe uJelly Chavani.
Ngomzuzu ka-72 uMandla Ncikazi, ocuja iBucs, ubezitshela ukuthi sebelitholile igoli kodwa ibhola likaKabelo Dlamini lachithwa uNkosingiphile Gumede kwaba yikhona.
UGumede uphinde wavimba ibhola elibi likaZakhele Lepasa ngomzuzu ka-75, kucaca ukuthi iBucs seyifika iphindelela. Lo nozinti ugcine eqokwe njengomdlali ovelele kulo mdlalo.
IPirates bese kungokweshumi idlala ngokulingana emidlalweni yeligi kule sizini. Isashaywe bathathu kuphela kodwa amaphuzu amaningi iwalahle ngokudlala ngokulingana.
Previous Previous post: Iphike ekugcineni iSwallows ukushawa yiStellies
Next Next post: UMulenga unxenxa aboSuthu ukuthi balisebenzise ithuba lasekhaya